Political Matters | Love Joshi | Page 2
(१५३) समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान वार्ताबाट मात्रै हुन सक्छ । प्रमाद र अहंकारले कदापि हैन ।
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु (१५३ )
२०७२ भाद्र ९ गते बुधवार
समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान वार्ताबाट मात्रै हुन सक्छ । प्रमाद र अहंकारले कदापि हैन ।
बहुप्रतिक्षित संविधानको मस्यौदा विधयक संविधान सभामा छलफल जारी छ । कैलालीको टीकापुरमा भएको अमानवीय हिंसात्मक बिउ तराईको पूर्व र पश्चिम तर्फ फैलंदैछ ।शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सेना परिचालन गरिएको छ । निषेधाज्ञा जारी गर्दा पनि तोडिने प्रयास भईरहेको छ । कतै गोली चलेको छ । नेपाली सेनामाथि जनताको भरोसा छ । अवाँक्षित गतिविधि नियन्त्रण गरी देशको अखण्डता अक्षुण्य राख्ने दायित्व सेनामा हुन्छ, अन्तत्वगत्वा ।महाभूकम्पमा नेपाली सेनाले विपदमा परेका नेपालीको उद्वार गरेको ताजा नै छ ।नेपालीले सेनाको सम्मान स्वरुप सलाम गरेको थियो ।
नेतागणले आम नेपाली जनताको आत्माको आवाजलाई उच्चतम दरमा संविधानमा समावेश गर्नु पर्दछ । आत्मसंतुष्टि र आ-आफ्ना भोट बैंककोलागि सिमाँकन प्रभावित गर्नु कदापि हुंदैन । विवादित विषयलाई जनमत संग्रहमा लैजानु पर्दछ ।कसैको प्रलोभनमा नपरी नेपाली मात्रको दीर्घकालीन हितकोलागि संविधान बनाउन बल लगाउनुस् । होस्ते भन्नुस्, जनता हैंसे भन्छन् । विगतमा वा अनजानमा लोभीपापी मनलाई शान्त पार्न केही योगदान भएको भए प्रायश्चित गर्न आराध्यदेव पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुस् । आशुतोष भगवानले क्षमा र सदबुध्दि प्रदान गर्नु हुंने नै छ । समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान वार्ताबाट मात्रै हुन सक्छ । प्रमाद र अहंकारले कदापि हैन । हजारौं हजार जनताको वलिदान भई सकेकोछ , अब कसैले वलि चढ्न नपरोस् ।
(१५२) टीकापुर घटना : शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मर्म विपरित
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु (१५२ )
२०७२ भाद्र ८ गते मंगलवार
टीकापुर घटना : शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मर्म विपरित
२०७२ भाद्र ७ गते सोमवारका दिन कैलाली जिल्लाको टीकापुरमा प्रहरीहरुमाथि जुन बरबर्तापूर्ण हमला भयो त्यो नितान्त निन्दनीय छ । त्यो शान्तिपूर्ण रूपमा हुंने भनिएको आन्दोलनको मर्म विपरित सिद्ध भएको छ । सीमाँकनको विषय लिएर धेरै दिनदेखि आन्दोलन भई रहेको थियो । त्यसले त्यो विभत्स रुप लेला भन्ने पूर्वानुमान थिएन । हाम्रा नेताहरु संविधान सभाको टेवुलमा बसेर निर्णय नगरी कोठा कोठामा बसेर मनमाना गर्ने बानीले गर्दा यो असंतोषको परिणाम् गोचर भएको हुनु पर्छ ।
संविधानमा जन्मने वेलाको प्रसव पीडाले आमा र शिशु दुबैलाई सुरक्षित अवतरण गरावस् भन्ने कामना गर्दछु ।
(१५१) हामी नेपालीलाई हिमाल,पहाड र तराई एकीकृत भएको अखण्ड नेपाल चाहिएको छ ।
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु (१५१ )
२०७२ साल भाद्र ७ गते सोमवार
हामी नेपालीलाई हिमाल,पहाड र तराई एकीकृत भएको अखण्ड नेपाल चाहिएको छ ।
आज सोमवार कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटना अत्यन्त दु:खदायी छ । प्रदेशको सिमाँकनको सिलसिलामा यो घटना घटेको हो । प्रहरी अधिकृत एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेलाई भीडले कुटपिट गरी पेट्रोल छर्केर आगो लगाइ ज्यान लिइएको छ । अन्य सुरक्षाकर्मीहरुले समेत ज्यान गुमाएका छन् । सर्वसाधारण सहित २१ जना हताहत भएका छन् । निषेधाज्ञा समेत उलंघन गरेर भिड़न्त हुंदाको परिणाम थियो, यो ।कैलाली र रौतहटको ग़ौरमा प्रहरी र असन्तुष्ट जमात बीच यस्तो झडप साम्य पार्न सरकारले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेर सेना परिचालन गरेकोछ ।कर्फ़्यू लगाइएको छ । तराई आन्दोलित हुंने लक्षण देखिएको छ । साम्प्रदायिक सद्भाव, एकता र शान्ति कायम राख्नु नेपालीको कर्तव्य हो । तराई मधेसका २२ जिल्लामा शान्ति कायम हुनु पर्दछ ।
नेताहरुले विवेक नगुमाइ समग्र नेपालीको हित हुने गरी संविधान जारी गर्नु नितान्त आवश्यक छ । हामी नेपालीलाई हिमाल,पहाड र तराई एकीकृत भएको अखण्ड नेपाल चाहिएको छ ।
(१४५) देशमा सद्भाव र अमनचैन रही रहोस्
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १४५)
२०७२ भाद्र १ गते मंगलवार
देशमा सद्भाव र अमनचैन रही रहोस्
संविधान आउने पूर्वसन्ध्यामा देशको विभिन्न जिल्लाहरु अशान्त देखिएको छन् । मध्यपश्चिम,सुदूरपश्चिम,नवलपरासी, बाग्लुंग,सप्तरी ,जुम्ला र अन्य जिल्लाहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् । कतै “अखण्ड” को माग र कतै जातीय प्रदेश , कतै जिल्ला टुक्रिएकोमा आवेग देखिन्छ । तराई केन्द्रित सभासद्हरु संसद छाडेर सडक आन्दोलन गर्ने बिगुल फुकिरहेका छन् ।हिन्दू धर्मको स्थापनाकोलागि साधु सन्त महन्तले जुलूस निकालेको छ । जनताको बीचमा पुलिस गोली चलाउँछ । कारण आत्मरक्षाकोलागि भनिन्छ । सरकारले संयम गुमाउनु हुंदैन ।सरकार दशलाखमा एउटा प्राणको मूल्य तोक्छ । यो सीमांकनको सकस हो । असन्तोष हो । आक्रोश हो । अवैज्ञानिकता हो । चार जलले देशको ठेक्का पाएको होइन ।वैज्ञानिक र प्राविधिक विशेषज्ञहरु संमिलित टोली गठन गरेर भौगोलिक बनावटको आधारमा सीमाँकन र नामाँकनको निर्णय गर्नु पर्दछ । हामी पहिला त नेपाली नै हौं । हाम्रो देशको अखण्डता पहिला जोगाउनु पर्दछ । त्यसपछि गाउँ र जिल्लाको सीमानाबारे बसेर छलफल गर्नु पर्दछ । देशमा सद्भाव र अमनचैन क़ायम हुनु पर्दछ । देशले “हाम्रो र राम्रो” संविधान पाउनु पर्दछ ।
(१४४) बन्दले त्रस्त जनजीवन । जनताको छैन सरकारमा भरोसा ।
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १४४)
२०७२ साउन ३२ गते सोमवार
बन्दले त्रस्त जनजीवन । जनताको छैन सरकारमा भरोसा ।
३३ दलीय गठबन्धनले साउन ३१ र ३२ गते नेपालमा बन्दको आह्वान गर्यो । ३१ गते जनजीवन प्रभावित भयो । ३२ गते साउन महिनाको अन्तिम सोमवार परेकोले भगवान पशुपतिनाथको पूजा अर्चना गर्न लाखौंको भीड़ लाग्ने निश्चित रहेकोले बन्द खुकुलो रह्यो । हामी पनि दर्शन गर्न गयौं, प्रात: ५:३० बजे । भगवान पशुपतिनाथको प्राँगणमा नर भन्दा नारीको संख्या अत्यधिक थियो । सार्वजनिक यातायात न्यून संख्यामा चलेकै थियो । निजी सवारी नगन्य थियो । दुई पाँग्रे भने चलेकै थियो । धर्मकैलागि नेता कार्यकर्ताले बल प्रयोग गरेको बिरल्लै पाइयो ।यो नेतागणको सकारात्मक सोच हो । साधुवाद यसनिम्ति ।
दिउँसो गौशाला, नयाँ बानेश्वर , मैतिदेवी,पुतलीसडक, दरवारमार्ग, ठमेल र सोर्हैखुट्टे गएं । ५ वटा बैंकहरुमा केही न केही काम बोकेर गएको थिएं । बैंकका कर्मचारी च्यानल गेटमा ताल्चा मारेर भित्र बसेका थिए । बन्दको कारणले थोरै कर्मचारी मात्र आएका थिए । कामको गती सुस्त थियो । सबै त्रसित । बजार ९५ प्रतिशत बन्द ।दुकान खोलेमा तोड्फोड नुक्सानको डर ।कसले हेर्न आउँछ ? कसले भरोसा र सुरक्षा दिन्छ व्यवसायीलाई । सरकारले ? हाँस्छन् उनीहरु सरकारको नाम सुनेर । सरकार छैन, उनीहरुकोलागि ।धेरै पटक धोका खाइ सके व्यवसायी र उद्यमीहरुले त्यसैले बन्दमा बाध्य भएर बन्द गर्छन् , उद्योगी र ब्यापारीहरुले ।
(१४३) बन्द गरौं “बन्द संस्कृति
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १४३)
२०७२ साउन ३१ गते आइतवार
बन्द गरौं “बन्द संस्कृति
आज नेपाल बन्द । ३३ दलीय गठबन्धनले आह्वान गरेको । बन्दकोलागि खर्च लागेछ, तीन अर्व ।यो बन्दमा नोक्सान हुंने अर्थतन्त्रको आँकड़ा हो । नेपालका राजनैतिक दलहरु कहिल्यै नसुध्रने भए । बन्द तिनीहरुको मौलिक अधिकार भइसक्यो । न पर्यटकसंग मतलब छ ,न अशक्तसंग । न बन्दब्यापार संग सरोकार राख्छौं , न त संविधान लेखनसंग सरोकार राख्छ । जनताको कन्तबिजोग भइसक्यो ।विकल्प किन सोंचदैनन् ? प्रतीकात्मक बन्द किन गर्दैनन् ?